I-china isiko eprintiweyo yefilimu eprintiweyo yefrikhi yokupakisha yefektri kunye nabenzi | Hong Bang
I-HONGBANG isasaze umgangatho ophezulu oshicilelweyo weemveliso zefilimu kubathengi baseYurophu naseMelika ngaphezulu kweminyaka engama-20. Inika iintlobo ngeentlobo ezahlukeneyo zothintelo lweplastiki elaminethiweyo ifilimu. Uninzi lweemveliso zefilimu zisetyenziselwa ukufakelwa kokutya kwaye ezinye ziya kwizicelo ezizodwa.
Sibonelela ngezisombululo zoluhlu lwasendle lwezicelo zemiboniso bhanyabhanya. Inani lolungelelwaniso olunokwenzeka kwifilimu yethu yomaleko omninzi alunasiphelo. Nokuba ufuna ukupakishwa kwento yakho yokutya efriziwe, okanye isidlo esiphekiweyo sangaphambi kokutya, sinokukunika isisombululo esifanelekileyo. Siyakwazi ukuhlangabezana nezona mfuno ziphambili zepropathi yobushushu, ukukhanya, ioksijini kunye nomoya, ukufuma kunye nomgubo.
Iifilimu zethu ezithintelayo zibandakanya i-CPP, i-PET, i-EVOH, i-PP eyenziwe ngetsimbi, ifoyile, i-TOPP, i-VMPET. Kwiimfuno ezizodwa, njengokupakisha okuzenzekelayo, sinikezela ngokutywinwa okuphezulu kunye neefilimu ze-thermoforming. Ifilimu yethu ye-7 yenylon / ye-PE ibe yinkokeli yamaxabiso eYurophu naseMelika okanye kwiifilimu ezithintelayo zivunyiwe yi-FDA.
Iimpawu kunye nokukhetha
I-Coex kunye ne-barrier barrier roll
Ubuninzi be-poly roll
Umqulu onokuboliswa ziintsholongwane
Ifilimu yoLuhlu luyilo oluthile lomgca wefektri. Singasenza isiseko sefilimu kwimfuno yakho, sinokuba yifoyile yealuminium, ifilimu ye-BOPA / NYLON, ifilimu ye-ALOX, ifilimu ye-SIOX, iPolyester, iBOPP njl.njl. .
Sibonelela ngezisombululo zoluhlu lwasendle lwezicelo zemiboniso bhanyabhanya. Sixelele imfuneko sakho siya kudibana nazo zonke iintlobo zeemfuno. Asivelisi iimveliso kwaye sizama ukukuqhubela kuzo; simamela kwiimfuno zakho kunye neenjineli ezintsha eziza kusombulula iingxaki zakho zokupakisha.
Egqithileyo UkuPrinta okuPrintwayo kwePlastiki yePlastiki yesiqhelo
Okulandelayo: Ukupakisha imaski ebusweni
Umtya wokuTywina iTywina eli-10, X-50'- 2 ...